Thio Seng Bie: Niaritra Herisetra Sady Tia Harena Ara-panahy
TANTARANY Anti-panahy izy ary tsy nivadika na dia niharan’ny herisetra vokatry ny fanavakavahana aza.—Notantarain’i Thio Sioe Nio, zanany vavy.
NISY korontana teto Java Andrefana, tamin’ny Mey 1963, satria betsaka no tsy tia Sinoa. Ny tao Sukabumi no tena mafy, nefa tao izahay no nipetraka. Mpitatitra entana tamin’ny kamiao izahay tamin’izany. Olona an-jatony no niditra an-keriny tao aminay, anisan’izany ny mpiray tanàna taminay. Niara-nitampify izahay sady nihorohoro rehefa nanimba sy nandroba ny fanananay ry zareo.
Nampahery anay ny mpiray tanàna hafa, rehefa lasa ny mpirotaka. Nipetraka teo amin’ny tany tao amin’ny efitra fandraisam-bahiny ry zareo, niaraka tamin’i Dada. Hitan’i Dada teo amin’ireo entana efa potipotika ny Baiboliny. Nosokafany ilay izy, dia nohazavainy fa efa voalazan’ny Baiboly ireny olana ireny. Noresahiny avy eo ireo zavatra mahafaly hataon’ilay Fanjakana.
Tsy ny hanangona harena eto an-tany no tena nimasoan’i Dada. Naveriny foana hoe: “Ny ara-panahy no tsy maintsy atao loha laharana.” Ohatra tsara izy, ka nanaiky ny fahamarinana izahay enina mianadahy, Neny, Dadabe izay efa 90 taona, ary ireo havanay sy mpiara-monina aminay be dia be.
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fanavakavaham-bolon-koditra?
Mitovy daholo ve ny olona rehetra, na inona na inona firazanany? Mbola ho foana ve ny fanavakavaham-bolon-koditra?